Ishaya imisindo ... I-Gnash, i-Flash ne-HTML5 | Kusuka kuLinux
Ukushaya umgqigqo… I-Gnash, i-Flash ne-HTML5
nano | | Aplicaciones, I-GNU / Linux, Izaziso
Ngikhuluma ngayo yonke le nto manje «Chrome sizoba yedwa kwi-Linux browser » Kwesinye isikhathi kungenza ngifune ukuzishaya ngibhekane nodonga, ngoba yize kuyiqiniso ukuthi manje isizoba nethuba eliphawuleka kakhulu phambi kwezimbangi zayo, akuyona into engeke yathunyelwa ngqo kwezinye iziphequluli, empeleni, sezikhona izindlela kusuka ekushumekeni kuye Upelepele ( injini ye-flash ye Chrome) e Firefox, futhi bayayibona lapha, ngakho-ke ngokuhamba kwesikhathi ngeke kuthinte iziphequluli ezinkulu, empeleni, ngiyangabaza ukuthi ezinkulu zize zicabange nokumisa ukusebenzisa le njela nganoma iyiphi indlela kwiziphequluli zazo, angicabangi ukuthi zikwazi ukungakwenzi futhi zilahlekelwe i-quota yomsebenzisi. Eqinisweni, ngokwazi kwami ​​ayikho ilayisense yokusebenzisa lesi sengezo esivimbela ukusetshenziswa kwenjini kwezinye iziphequluli, ngokuhamba kwesikhathi lezo ezithintekile zizoba iziphequluli ezincane empeleni ezifana Reqonk, Midori, njll, ngubani ozothinteka kakhulu ngoba kusobala kakhulu ukuthi abanayo imithombo yabantu abanayo, ngokwesibonelo, Firefox.
Ngamafuphi, zonke lezi zinketho zihlala zivela, nephrojekthi I-GNU akuzange kuthathe isikhathi eside ukubonwa nge Ukuququda, okulingana ne- Flash, kodwa mahhala. Ngokwazi engikubonile futhi ngakuvivinya, kuziphatha kahle kakhulu, yize kunezinto ezingaphezu kwe-480px kuya esihogweni nangemidlalo yesiphequluli efana I-Super mario crossover ayingigijimeli, yingakho ngithi inendlela enkulu okufanele ihambe. Kepha kulapho ngilahla khona ibhomu lami: Mina Angimsekeli uGnash, ungangizwa kabi, akuyona iphrojekthi embi futhi angisho ukuthi ayikufanele ukwesekwa, kodwa ngokwami ​​ngikubona kuwumzamo ongenangqondo wokuphikisana Flash, ipulatifomu leyo ugwetshwe ukufa ngabadali bayo nokuthi izosebenzela kuphela imidlalo nezinye izinto Ngaphandle Kwesiphequluli kusukela abantu abafanayo abavela I-Adobe Bathe bazobeseka I-HTML5 futhi bazothumela umbusi omkhulu ku Flash njengengxenyekazi yewebhu.
Angiqondi ukuthi yini inzondo yokubheja ephikisana nayo Flash kanye nesidingo sokufuna ukuncintisana nayo, kubonakala kimi ukuthi sihlukanisa umzamo, ukuthi sithatha izinyathelo ngezindlela ezahlukahlukene ukuze sakhe inqubo evulekile yokukhiqiza kabusha kuwebhu, Madoda banikeze, angazi noma uyayikhumbula yini Ingabe i-HTML5 100% ayivuli njengayo yonke imvelo yayo? Ngabe ayiqhutshwa umphakathi nenhlangano evulekile nebala? Lokho kwalokho "Izinkampani ezinkulu ziyayisebenzisa" kungudoti omsulwa, futhi ubufakazi busezindabeni: I-W3C ithi CHA ku-DRM ku-HTML5Bangasho ukuthi mass and rant noma yini abayifunayo kodwa lapha phakathi kwethu ... Uyazi ukuthi ungayakha kanjani indinganiso? Cha? UKUSEBENZISA! Microsoft y -Google Bangazama ukusebenzisa noma yini abayifunayo, kepha uma kungekho noyedwa oyisebenzisayo, ayilinganisi, isikhathi. Angazi ngawe, kepha lokho kwe «Lindela ukuthi lifike I-HTML5« kuyahlekisa, I-HTML5 ilapha, sesivele siyayizwa, siyisebenzise, ​​siyizame, sidale futhi siqhubekisele phambili lokho isihogo esikudingayo njengama-clones Flash? Sivele sinobuchwepheshe bangempela, obuvulekile nobuthuthukayo ezandleni zethu, hhayi ukuthi silwe (njenge Flash udele) kepha ukusebenza ngokukuqothula ngokuphelele emephini.
Ukuzibeka ekuhlaziyeni izinto kancane konke lokhu kugcina sekuba yinto engenangqondo, kwesinye isikhathi isifiso sokufuna ukulwa nanoma yisiphi isincomo esingakhululekile I-GNU futhi abantu abaningi bagcina sebebaphuphuthekisa, futhi akekho oyimpumputhe omubi ukwedlula lowo ongafuni ukubona. Sengivele ngicabanga inani lamazwana asho lokho I-HTML5 Kungcono ukufuna isihlalo ngoba kuzothatha isikhathi ukufika, kahle-ke, ngiyathemba ukuthi ngeke nihlalise abanumzane abaningi ngoba vele sesifikile.
Kepha namanje kunjalo Ukuququda Akufezi okufunayo futhi ungomunye walabo abenqabayo ukusebenzisa I-HTML5 Yebo, ngicabanga ukuthi kungenzeka ukufaka Flash nge Iwayini nokuya esihogweni nabanye, ngoba uma ungenandaba nanoma yini futhi ufuna umphelelisi wakho ngaphandle kokushintsha isiphequluli noma uthinte i-terminal, yenza into yokugcina eshiwo futhi yilokho ... angikakuzami kepha ngikwenzile I-Adobe Air Futhi kusebenza njengeparele kimi Ngicabanga nge Flash kungenzeka futhi.
Noma kunjalo, ngiyakuphinda: kumane nje kuyindaba yokuthi ngishilo ngaphambili, ngisebenzisa ubuchwepheshe esinabo ezandleni zethu futhi sibusiza ukuthi buqhubekele phambili, I-HTML5 intuthuko ngezinyathelo eziphindwe kayinkulungwane kune Ukuququda noma yini enye (yize ngingeke ngibaphazamise ngomzamo wabo, angimane nje ngisekele iphrojekthi ngoba sengivele ngisekela enye) futhi izokuqeda ukufika masinyane kunalokho ebesikulindele, empeleni, izobe isilungile ngaphambi IGnash noma iLihgtspark baze babe enye indlela esebenzayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Ukushaya umgqigqo… I-Gnash, i-Flash ne-HTML5
Ngisebenzisa i-gnash pk kumahhala, futhi phakathi kwezinye izindlela zamahhala iyona ehamba phambili kakhulu, i-lightpark ayikakafiki kuyo
hhayi ngokuncintisana ne-adobe noma inzondo noma i-bullshit, kepha i-pk imahhala nesikhathi
Leyo yifilosofi yami, futhi uma kufanele ngiyeke amakhasi athile angahambisani nomnyovu, bese ngiyayeka, awangithandi
Nginentshisekelo yenkululeko kuphela
Lokho kuyahlonishwa uma uthanda ukuthi ibe mahhala, kepha i-HTML5 nayo imahhala futhi futhi akekho osho noma yini ukuyivikela.
Angiyisebenzisi iGnash ngoba njengomqambi wewebhu engifuna ukuba yikho, ngisekela ubuchwepheshe obuyikusasa, nokunye okuningi uma lobo buchwepheshe bumahhala.
Ngendlela, ngiyacacisa ngaphambi kokuthi bahambe. Ngisefasiteleni ngoba i-pc yami enkulu iphucwe izikhali, ngiyinakekela njalo ngekota
... Njengamanje isuselwe entweni efana neCuba (Venezuela) kanye nomthandi wokunyathela ...
... By the way, ngiyacacisa ngaphambi kokuba bangene ...
JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA IJOLA LINGATHANDI UKUTSHATSHELWA
Ingabe ikhona eyodwa uma uyayithanda? Eqinisweni, lowo mlayezo ubhekiswe kuzinto ezithile ezithile ...
Akekho umuntu othi noma yini ukuyivikela?
Kepha uma okuthile kunabalandeli, yi-HTML5, esivele ibonakala ingumesiya wesibili ozoxazulula zonke izinkinga zethu.
Ohlale ekhishwa inyumbazane futhi edelelekile kube nguGnash.
Ngaphandle kwalokho konke ngokuya nge-nonamed.
Hhayi-ke, awukwazi ukuqhathanisa iFlash ne-HTML5 kuleyo ndaba. Okokuqala, khumbula ukuthi i-HTML5 imahhala futhi azikho izinkampani ezithuthukisela imikhiqizo yohlobo lweFlash efanele. Okwesibili ukuthi i-flash kade yaba ubuchwepheshe obujwayelekile. Kunoma ikuphi, ngokuhamba kwesikhathi, ukuvela kuyavela futhi kulo mhlaba kunesigaba esikhethekile sabantu ababizwa ngokuthi amaHacker, bazi kahle abakwenzayo futhi benza umsebenzi wabathuthukisi bethu ube lula kakhulu.
Noma kunjalo, uma ufunda kancane uzobona ukuthi i-Adobe ihlela ukwethula ithuluzi layo lokuqala le-HTML5 kulo nyaka, akukho dreamweaver noma izinto ezinjengalezo, kepha ngqo ithuluzi lokusebenza ngqo ne-HTML5 nayo yonke imvelo yayo.
Ngokwami, bengingeke ngibe nesibindi sokubiza isoftware yamahhala ye-HTML5, kepha umgomo ojwayelekile noma umhlangano. Njenge-HTML uqobo. Futhi ukuthuthukisa le software ebonakalayo singathola amathuluzi; njengeDreamweaver uqobo, osho. Singakwazi nokudlela ngisho ne-Photoshop, ngoba izinga lesithombe akulona elakwa-Adobe. I-More Premiere, Ngemuva Kwemiphumela, I-Illustrator, Iziqhumane, njll. Futhi ukusuka lapho singagxumela ku-Visual C ++, okuyindawo yentuthuko ye-C ++, Maya, njll. Ngichaza ukuthini? Kuthiwani uma kunezinkampani ezenza isoftware yangasese yokuthuthukisa amazinga noma izilimi zamahhala.
Futhi yini isihogo thina abathuthukisi abanentshisekelo kuyo uma kumahhala noma cha, into UKUTHI KUYASEBENZA !!!!! I-Gnash njengomdlali i-reverend crap, isebenzisa kabi izinsiza ezilingana noma ezimbi ukwedlula i-flash, ngaphandle kokuba nochungechunge lokungqubuzana okubi nokusekela ikhodi yayo yokwenza ku-flash 10. intuthuko yewebhu ... I-HTML11.2 iyindlela yokuthuthuka yentuthuko kepha iseluhlaza okotshani futhi angisho ukuthi kufe abantu ngokushesha kepha ukuncintisana okunamandla okuqondiswe emkhakheni othile wemakethe, lokhu akusho ukuthi i-flash ngeke iguquke, ibuyise ubukhosi ukuthi inemakethe, i-HTML5 iseyinkimbinkimbi kakhulu ukuyihlela, ngiyayiguqula uma ngikwazi futhi uma kungenjalo imahhala noma cha lokho akunandaba kimi 5 ngiyathanda ukusebenza futhi kwezinye izinto ngisebenzisa ipulatifomu okunye okunye, kakhulu ekuzilungiseleleni kwami ​​hhayi okwezintshisekelo zomphakathi okufanele ngikuthole kimi, amapulatifomu nezinhlelo zakhiwa ekuqaleni nasekupheleni ukuze zisebenze hhayi ngokuvumelana nezinhloso ... PON LOS PI KUNGOKOMHLABA !!!!
Bekungeke kube lula yini nge-Adobe Flash Professional ukuthekelisa noma kube nenketho yokuthekelisa ku-HTML5? Vele, ngicabanga ukuthi lokho kulula kulula ngoba angazi ukuthi kungabiza umsebenzi ongakanani ukuletha yonke i-Action Script nokugqwayiza ku-HTML5 + Canvas + CSS3 + JQuery code ... njll
Yimibuzo yokuphendula i-XD
Angazi ukuthi izoyenza ibe lula kanjani, bavele bathi bazoyikhombisa kulo nyaka. Ukuze wenze ukugqwayiza nanoma yini oyifunayo ngeGedit ungakwazi ngoba ungakwazi, empeleni izingcaphuno ezilungisekayo ze-gedit zikuvumela ukuthi wakhe kalula imiyalo oyidingayo futhi uyishayele ngaphandle kokusetha kusengaphambili, okuthi ezintweni ezinjenge-dreamweaver zigcwele udoti nokuthi nge-gedit umane Ngiwenza ngezifiso.
Kepha kuyimibono yomuntu siqu. Ngokuphathelene ne-HTML5, ngoba ulimi lohlelo akuyona isoftware yendabuko njengoba silazi, kepha uma iyi-software, futhi i-HTML5 imahhala ngokuphelele, noma ngubani ofuna ukuthuthuka ayizungezile futhi lokho akukwenzi kube okukhethekile noma okulawulwayo yizinkampani ; Ngikushilo ngaphambili, bangenza futhi basho noma yini abayifunayo, kepha ekugcineni abakwazi ukusebenzisa noma yini ku-HTML5 kanjalo nje.
Isebenzisa ama-flas kumafasitela konke kulungile, kepha ngemuva kokuzama i-osx ne-linux nge-ati, kuyabamba ukuthi ngo-1080p kudla zonke izinsiza ze-pc, kunenkinga, uma benza ukushesha nge-gpu kusebenze nge-ati ku-linux naku-osx Bengingeke ngibe nesikhalazo, kepha yeka ikhambi, ukubona isimemezelo, udinga ukukhanya.
Udinga iFlash, ngiyisebenzisela izingane ezithile xD
Ngakho-ke ukukhanya ngaphandle kokusebenzisa izinsiza kusebenza futhi kukhuthaza ukuthola i-AIDS.
Hhayi-ke, cishe angiyona ngisho incwadi lapho ngithenga ikhompyutha
Kwesinye isikhathi usho umbhedo omningi ..., kulokhu isibani sikukhulula engculazini, sokwenza ungathinti abesifazane bangempela.
Sanibonani nonke, ngisha kuleli khasi. I-blog iyathakazelisa kakhulu, siyakuhalalisela, bengifuna imininingwane nge-Gnash ne-Google yangiletha kule ndatshana.
Ngisebenzise iLinux, ikakhulukazi lapho ngithuthukisa eJava, manje sengiku-Windows 7, ngiyethemba awunandaba nokuthunyelwe okuvela kumsebenzisi weWindows.
Okwenzekayo ukuthi ngivivinya ngesoftware eyakhiwe kuFlex naseJava ngeCentos Linux (yamanye amatheminali), futhi isebenza kabi kakhulu noGnash, ekugcineni kwadingeka ngifake i-Flash plugin futhi nginqume ukuphenya ngokusebenza kweGnash Ake sibheke ukuthi ngingakushintsha yini okuthile kukhodi kepha kuyini, ngifunde ukuthi kuluhlaza okotshani uma kuqhathaniswa ne-Adobe Flash plugin (nina bochwepheshe beLinux bazongitshela ngenye indlela uma nginephutha).
Futhi maqondana nokuthunyelwe kuka Mnu. INano, i-Adobe ilahle iFlash ngaphandle kwento, yize kuyiqiniso ukuthi bayayisekela ngokuphelele i-HTML5, basanda kushicilela ikhalenda kule minyaka eyi-10 ezayo futhi bacabanga ukuyisebenzisela imidlalo nokusakazwa kwevidiyo ngaphakathi kwesiphequluli, kanye ne-Adobe Air yezinhlelo zokusebenza zeselula. (yize kusebenza nakwiDeskithophu). I-Flex SDK inikelwe i-Apache, manje ibizwa nge-Apache Flex. Kepha nakanjani njengoba izinto zinjalo futhi njengoba kunconyiwe yi-Adobe, kuphrojekthi entsha yohlelo lokusebenza lwewebhu okwamanje kungcono ukusebenzisa okunye ngaphandle kweFlash.
Akusikhathazi nakancane ukuthi abasebenzisi beWindows, Mac, iOS noma i-OS abafuna ukusebenzisa ukuphawula okuphawuliwe, nokuncane kakhulu, lapho kungumbono onenhloso ofana nowakho.
Ngifundile ukuthi kuluhlaza okotshani maqondana ne-Adobe Flash plugin (nina bochwepheshe beLinux bazongitshela ngenye indlela uma nginephutha).
Ngicabanga ukuthi impendulo emfushane futhi enembile kunazo zonke lokhu okuvela kuwebhusayithi yakho.
«I-Flash inwetshiwe ukufaka okuqukethwe komsindo nevidiyo, nezinhlelo ezibhalwe nge-ActionScript, ulimi oluhambisana ne-ECMAScript. IGnash isuselwa ku-GameSWF, futhi isekela izici eziningi ze-SWF v7 nezinye ze-SWF v8 ne-v9.
I-SWF v10 ayisekelwa yi-GNU Gnash.«
Ngicabanga ukuthi umbhali kufanele azazise kancane ngaphambi kokubhala ngezinto ezithile, ukugwema ukwenza amaphutha.
«Ingabe i-HTML5 100% ayivuli njengayo yonke imvelo yayo? Ngabe ayiqhutshwa umphakathi nenhlangano evulekile nebala? Ukuthi “izinkampani ezinkulu ziyayisebenzisa” kuwudoti omsulwa, futhi ubufakazi busezindabeni »
Eminyakeni edlule i-W3C ayizange ibamukele abalingani bezinkampani ezinentshisekelo. Uqale ukukwenza kwathi abantu abenza isikhundla sakhe ku-W3C bahambisane nezikhundla eMicrosoft, Apple noma iGoogle bangena ngokushesha. Eqinisweni, "impi" ephindwe kabili ekuchazeni izinga levidiyo ku-HTML5 yayinjalo ngqo ezithakazelweni zalabo abalingani abanentshisekelo. Inhloso yemidwebo yokuqala yezinga, ngisho nabalingani "abahlanzekile", bekuwukusebenzisa i-OGV neTheora neVorbis. Ngesikhathi kwathathwa isinqumo, eminyakeni eyalandela, kwase kuyimpi yokuthonya phakathi kwe-VP8 (ephethwe yiGoogle) vs H264 (ephethwe yinhlangano lapho i-Apple neMicrosoft benesibalo).
«Uyazi ukuthi ungayakha kanjani indinganiso? Cha? UKUSEBENZISA! IMicrosoft kanye neGoogle bangazama ukusebenzisa noma yini abayifunayo, kepha uma kungekho noyedwa oyisebenzisayo, ayihambisi, isikhathi. "
Lokho kungamanga, kubonakala sengathi lowo obhalayo akazi ukuthi angayakha kanjani indinganiso kepha azame ukufundisa. Izinga alidalelwanga ukulisebenzisa, lingenangqondo, noma ngabe kunjani lithandwa ukusetshenziswa. Ukuyakha, kunezinqubo ezithile, ezibandakanya ukwakhiwa okuphindaphindwayo kwemidwebo efaka imiphumela yezinqumo ngamaphuzu athile okufanele asetshenziswe. Akukhona ukuthi inkampani ngayinye iyayisebenzisa njengoba ithanda, kepha ukuthi inkampani ngayinye izama ukuthonya lezo zinqumo kuze kufike ezingeni eliphezulu ukuze izinga lishintshwe kusukela ekuqaleni kuye ezithakazelweni zebhizinisi labo.
Ngaphandle kwalokho, ngivumelana nombono oyinhloko, kepha ngibona kukungahloniphi ukuphakamisa ukuthi abathuthukisi beGnash akufanele. Akekho okufanele azame ukutshela abahleli bohlelo, abahlelela uthando lwezobuciko, ukuthi bangasisebenzisa kanjani isikhathi sabo. Siphila ezweni lapho izinkulungwane zonjiniyela zizama ukudala ezinye izindlela zayo yonke into ephathelene nomnikazi ukuze inani eliphakeme labasebenzisi libe nazo uma zifuna, futhi ngaphezu kwalokho abanye bayakhalaza bese bezama ukusho ukuthi lokhu akufanele kube njalo.
Ukubhala okuthunyelwe kwebhulogi kungumsebenzi ngoba baningi abantu ababafundayo ukuze bazazise. Kufanele uqaphele kakhulu ngokwenza amaphutha ngamabomu noma ngenxa yokushoda kolwazi ngoba lokho kuthinta abantu abaningi.
Angikholelwa ekulungeni kwezepolitiki, amakhosi akwaGnu angabokuqala ukungabi khona, futhi ngendlela efanayo nokuthi awana 'inhlonipho', ngendlela efanayo ayilahlekelayo, okutshalayo, uyavuna.
Okokuqala, ngakusho ngokusobala ukuthi angiyisekeli iGnash, hhayi ukuthi abayikhulisi, ngiyawushayela ihlombe umzamo yize ubonakala ungenamsebenzi ngezindlela eziningi.
Okwesibili, bangakha indinganiso abayifunayo, kepha uma kungekho noyedwa oyisebenzisayo noma ofuna ukuyenza, ivele ihlale lapho, ngokombono iyindinganiso kepha kuphela lokho.
Ngeke ngibe ngunjiniyela oyingcweti noma ngibe nolwazi oluphakeme kakhulu ngale ndaba, kepha uma kukhona into eyodwa engiyaziyo ukuthi lokhu engikushilo kunezisekelo nokuthi angingedwa ocabanga ngakho.
Ngiyawuthanda umbono wakho, ungowokuqala ukukwenza ngale ndaba, kepha ungazami ukungisonta nami, angiyena umuntu ongenalwazi ongenazo izisekelo.
Ngifuna ukukukhumbuza ukuthi manje njengoba izinkampani sezinabantu ku-W3C, BANAZWI lokugcina ngoba laba bantu babamba iqhaza ngqo ezinqumweni.
Ukuthi abakwazi ukwamukela zonke iziphakamiso ezithandwa yibo akusho ukuthi abanamandla okukhohlisa, kepha ukuthi abakwazi ukwenza lutho kulesi simo. Eqinisweni bakwazile ukushintsha isinqumo sokuqala ku-codec yomsindo nevidiyo. Musa ukudida inkinga ngengozi, ukuthi okuthile ngeke kumiswe akusho ukuthi akukho ndawo yokwamukela izivakashi noma ukuthi abanamandla. Kunzima kakhulu ukukholisa umuntu ukuthi azibulale.
Angikubizi ngokuthi awazi, inhloso yami akukhona ukona, ukude nakho. Kuvele kwanginaka ukuthi usebenzise amabinzana athile we-lapidary, angabonakali engalungile kimi.
UNano, ngenkathi usho iSuperMario Crossover angikwazi ukuzibamba ngikhumbula ukuthi sekukhona okungenani umdlalo owodwa obizwa nge-Infinite Mario owenziwe nge-HTML5, ngakho-ke ipulatifomu inamandla amakhulu.
Yilokho engizama ukukusho, i-HMTL5 (ngikhuluma ngemvelo) inamandla amaningi. Anginenkani kangangoba ngithi unakho konke okulungile, akunjalo, kepha amandla akhona akhona, futhi nsuku zonke iyakhula futhi ikhule.
Ukungasho izinzuzo ezifana nenkululeko yokusebenzisa kanye nokukhanya, kufanele kucace ukuthi i-HTML5 empeleni ilula kakhulu kuneFlash.
Angicabangi, empeleni ukuthi awusekeli i-gnu flash, kodwa kunalokho ngicabanga ukuthi awusekeli nhlobo i-flash. Wozani, i-flash bekuyindlela enhle yokubuka amavidiyo ekhasini lewebhu kepha masethembe ukuthi angikayiboni ikhasi elihle le-flash Angikaze ngiyithande (zibukeka zithakazelisa kepha zidinga izinsizakusebenza eziningi futhi ukugqwayiza kuthatha isikhathi ukulayisha nokunye) ziba nzima, kimi iphutha ngukuthi i-flash iyaphela, asihambe uma i-adobe uqobo ingenandaba nokuthi kwenzekani Nge-flash, ngoba njengamanje lowo osizakala kakhulu nge-flash kune-YouTube kune-YouTube eye-Google, ngakho-ke ungalindeli okunye, ukwakheka kwe-html 5 kuyinto ethatha isikhathi kodwa konke kuthatha inguquko, akekho ozoshintsha ngoba Iphume ku-5 wonke amakhasi e-web azoyisebenzisa, ukuqaliswa kwe-html5 kuzobonakala njengoba kunesidingo esikhulu sevidiyo nokusetshenziswa okungcono kwezinsizakusebenza zombili ze-cpu, gpu nenkumbulo yenqama, uma i-html5 isivele iphume kepha ingakavuthwa, kufanele uyiyeke ivuthwe bese ubona ukuthi yini ukuthi inikeza futhi lokho nesikhathi. Kumele kuqashelwe ukuthi i-Gnu flash ikhona, kuyindlela engeyona engcono kunazo zonke, kepha kungcono ukuba nezinketho, uma ungenazo, wonke umuntu okhetha leyo ndlela ukhululekile ukwenza kanjalo, futhi nenhloso abafuna ukuyinikeza.
Into ukuthi, "ukuyilinda ivuthwe" kubambezela inqubekela phambili kuphela, indlela engcono yokwenza lokho kudinga, kusobala, ukusebenzisa lobu buchwepheshe. Sekuvele kune-youtube html5, okuyiyona engiyisebenzisa nsuku zonke. Angiyisebenzisi i-YouTube yendabuko futhi angikabi nayo ividiyo engingayiboni kule nguqulo ye-YouTube ...
Leyo "Chrome izoba ne-monopoly blab bla" bekulokhu kuyisilima (okungenacala noma okunonya) okudala ukushaya udonga.
Ukuqala ngeqiniso lokuthi udaba lokuthi i-API ingasetshenziswa yinoma ngubani, inkinga ukuthi abanye abakakwenzi okwamanje noma benqabe ngokuqondile ukukwenza, lokhu okwenzelwa isibonelo yisimo seMozilla esathi asizukukwenza, yize eqinisekile ukuthi uzoshintsha umqondo wakhe uma lokho kuthinta inani labasebenzisi (ngokwesibonelo, usevele waveza ukuthi "ulungele" ukusekela uH.264).
Ukuzibeka ekuhlaziyeni izinto kancane konke lokhu kugcina sekuba yinto engenangqondo impela, kwesinye isikhathi isifiso sokulwa nanoma yisiphi isincomo esingenayo inkululeko ku-GNU futhi abantu abaningi bagcina sebebaphuphuthekisile
Uxolo, kepha uGnash bekungeyona into ethandwayo, kubonakala sengathi awutholanga ukuthi uGnash wayekhona kudala ngaphambi kokuthi umuntu abize i- "HTML5", yazalwa ngezikhathi lapho abantu abaningi (kufaka phakathi "amaLinuxeros" amaningi) babazi kuphela ukuthi "Awukwazi phila ngaphandle kweFlash, ungakhulumi nami nganoma yini enye futhi NGIDINGA ukufaka i-Adobe plugin ».
Futhi iFlash ikhona ngale kwewebhu, i-HTML5 ayikho.
Ngingacabanga inani lamazwana athi ku-HTML5 kungcono ukufuna isihlalo ngoba kuzothatha isikhathi ukufika, awu, ngiyathemba ukuthi ngeke nihlalise abanumzane abaningi ngoba sekuvele kukhona.
Ngeshwa kufanele uthole umbhede. Akukhona lapha kuphela, kusese nendlela ende yokuhamba yokulinganisa (ngoba i-HTML5 idinga isikhathi futhi ayikwazi / ayifanele ukushesha ngaphezu komkhawulo owodwa) nesikhathi esithe xaxa sokuqalisa ngokufanele kupulatifomu ngayinye, ngoba lowo ngumehluko phakathi kweFlash ne-HTML5 , I-Flash incike ekuxhumeni okukodwa, i-HTML5 yokusetshenziswa kwenjini ngayinye futhi njengoba kubuhlungu futhi / noma kungakuhle kakhulu, akekho ozothenga leyo billet; Futhi angikhulumi nangokuthi akuphelele ukubona ukuthi abathuthukisi bazozijabulisa kanjani bezama ukwenza izinto zisebenzisane kuzo zonke iziphequluli, ngaphandle kokuthi basebenzise i-de facto yokufaka isiphequluli esibasebenzela kangcono.
Angazi ngawe, kepha lokho "ukulinda i-HTML5 ifike" kuyahlekisa, i-HTML5 isivele ikhona, singayizwa, siyisebenzise, ​​sizame ngayo, sakhe futhi siqhubekele phambili. Kungani isihogo sidinga ama-Flash clones?
Ziyadingeka ngoba LOT of material is still Flash, ngoba i-HTML ayikho lapha, ngoba uma i-Flash isebenza kabi ne-Gnash yenza kabi, i-HTML5 isebenza kabi kakhulu futhi ngubani owaziyo ukuthi kuzothatha isikhathi esingakanani ukwenza ngcono. Yini enamandla? yebo, kodwa inakho konke, ngisho noGnash unakho. Okwamanje, inketho enhle kakhulu yiGnash, yebo, ingcono kune-HTML5.
Uma i-HTML5 isebenza "ngokushesha okuphindwe kayinkulungwane" kuneGnash, kungenxa yokuthi i-HTML5 ibe nokusekelwa okukhulu. Ngabe ufuna okungaphezulu? Futhi ngakho-ke yonke into iyashoda futhi izodinga isikhathi; ngenkathi i-Gnash NJALO NJALO yayiklolodela kuphela kuwo wonke umuntu. Kepha ngiyaphinda ngiyasho, noma kunjalo, namuhla, iGnash kuyindlela engcono kune-HTML5, ingasaphathwa eyezinto eziyizinto eziqagelwayo.
Engingavuma ukuthi awekho ama-Flash clones amaningi "adingekayo" lapho eyodwa kuphela "idingeka", angizazi izizathu zokuthi kungani iSilvernoseque ihlukaniswe neGnash (yize ngicabanga ukuthi ngifundile ukuthi eyokuqala ngizojoyina owesibili).
Awunasizathu kulokho okushoyo. Angishongo ukuthi i-Gnash ibintsha noma i-flash ngaphambi kwe-HTML5, ukuthi wonke umuntu uyazi, kepha ngenxa yalesi sizathu ngithi i-HTM5 yilokho okuzayo, kuyindlela engcono yokwenza izinto ngoba ayibandlululi phakathi kwezinhlelo noma iziphequluli , Ukhona kunoma ngubani ofuna ukukusebenzisa, ngicabanga ukuthi uGnash, ngiyaphinda ngiyakholelwa ukuthi kungenxa ye-GNU / Linux kuphela (bekungeke kuzwakale kwenye ipulatifomu) neFlash kahle ... kuyabandlulula bonke labo abangewona amaWindows noma ama-OsX.
Thola umbhede, isihlalo, noma yini oyifunayo, ngaleso simo sengqondo esisikilizayo, kulula kanjalo. Angikhathali ukusho ukuthi, i-HTML5 isivele iyasebenza, iyahamba, ithatha izinyathelo, izinyathelo ezingezinhle, njenganoma iyiphi ingane, kodwa isivele iyahamba, futhi abaningi sebevele babona amandla akuyo… Izothathani? Yebo, kepha ngeke kuthathe iminyaka emihlanu noma eyishumi, ngeke, uma okungenani kuthatha iminyaka emi-5 ukuthi ikwazi ukusebenza kahle futhi ibe nekhono kakhulu kunalokho esivele ikhona; Hhayi nje kuphela ngenxa yakho konke ukwesekwa okukhulu enakho, kepha futhi nangenxa yomphakathi okhulayo wabagengezi nabathuthukisi abajoyina yonke into ezungeze imvelo ye-HTML10.
Ngiphinde ngicacise, angideleli (futhi ngakusho endimeni) Gnash, empeleni ngiwushayela ihlombe umzamo nesifiso sokwenza izinto engxenyeni ye-GNU, kepha ngikubona njengesichibi, indwangu yamanzi ashisayo kusukela ekuhambeni kwesikhathi Kuzoba yisiphukuphuku ukuyifaka lapho isiphequluli sakho sesivele siphethe amazinga we-HTML5, kuyabheda ukusenza sidle izinsiza eziningi lapho usunokuthile okusebenza kangcono ...
Namuhla i-Gnash iyindlela engcono kune-HTML5 ezicini ezithile ngoba kusobala ukuthi kunamakhasi asasebenzisa i-Flash Pluggin futhi ayidinga ukuthi isebenze ngezinto ezithile, kepha sekuvele kunezinguqulo zezinkulu njenge-youtube.com/html5 ezisebenza futhi Banikela ukubona amandla esinawo ku-HTML5, ukubona nje ukuthi konke kusebenza kahle (kusobala ngaphandle kwamaphutha athile) nokuthi konke kunamathele ku-HTML5, wow, kusinika ukuthi sicabange.
Ekugcineni, iFirefox eyeka i-H.264 kubonakala kimi kukuhle nokubi, kahle ngoba sibheke ekwenzeni izinto ngendlela efanele, ngoba i-HTML5 isizodlula ukweqa isithiyo sayo esiyinhloko, ama-codec, futhi ingagxila kuzindawo ezintsha ezibuthakathaka. Kepha kubi ngoba kuzodingeka sincike ohlelweni lwe-codec oluvaliwe, olubukeka luyisilima kimi; noma kunjalo, lapho i-Apple neMicrosoft bekulawula lokhu, kungalindeleka ukuthi bangakhethi ukusebenzisa iVorbirs V8 ngokwabo ... ekugcineni, njengoba ngishilo, labo abathintekayo yibo abancane ...
Iqiniso ukuthi, kuze kube manje angikayidingi i-Flash (angikayifaki eyodwa evela ku-Adobe, noma i-Lightspark noma i-Gnash), nge-Youtube ku-HTML5 ihamba kahle futhi ngizwa nokuthi amavidiyo alayisha ngokushesha okukhulu ...
Ngishiya eceleni isihloko se-Chrome ne-HTML5, ngingumsebenzisi we-Gnash, ngiyayisekela futhi ngiyayisebenzisa ngoba ilusizo kimi osukwini lwami usuku nosuku. Ngeshwa i-Flash ikuyo yonke indawo, amafomu, amawebhusayithi wezikhungo, amabhange nezinhlelo zokusebenza. Nayi i-Gnash, enye indlela yamahhala engivumela ukuthi ngiyisebenzise ngaphandle kokufaka okuthile okuphathelene nekhompyutha yami.
Futhi yize i-HTML5 isivele iyasebenziseka, ukwamukelwa kwayo ngabasebenzisi abaningi kusazothatha isikhathi.
Ngakho-ke okwamanje ngihlala noGnash.
Ake sibheke ukuthi i-gnash izokusebenzisa nini ukushesha kwe-gpu, ngoba i-amd x2 turion yami empofu ayikwazi ukubona ividiyo ye-youtube nayo….
Ngeprosesa endala kunaleyo ngikwazi ukubuka amavidiyo nge-Gnash.
Eqinisweni, angazi ukuthi uke wazibuza yini, kusukela nini udinga ukusheshiswa kwemifanekiso ukuze ubuke amavidiyo? kukhona okumele kungahambi kahle.
Lokho kungenye inkinga engiyibonayo nge-HTML5, kubukeka sengathi kuncike kakhulu ekusheshisweni kwemifanekiso futhi ukuyikhuphula kubonakala kungavumi ukuthola noma yiliphi ikhadi. Nge-HTML5 angikwazi ukubuka amavidiyo.
Sanibonani, bangane abahle kakhulu, ngiyethemba angihambi kakhulu, kepha kuncane engizokusho. Sengibe ngunjiniyela we-flex iminyaka embalwa manje, futhi ngiyaziqhenya ngokuziphendukela kwemvelo ebinakho kuze kube manje, bekungelula ngaso sonke isikhathi, bekungakaze kube mnandi ngaso sonke isikhathi, kepha ngingaqiniseka ukuthi izinhlelo zokusebenza engizilungisile futhi "engazakhela kuzo" bahlala njengoba uNkulunkulu ayehlosile, qala.
Kunzima ukuqonda ukuthi iFlash ibhujisiwe ngezaba zokungakhululeki, kanti empeleni umuntu oyedwa obhekene nesifiso sokulawula i-Apple, inkampani ebonakala ngeminikelo yayo emphakathini okhululekile ... angisho ukuthi ubengalungile ngenkathi ethi ukuthi izinhlelo ze-flash zithinte impilo yebhethri, kepha ngokusobala ukwenza kuphela kuholela ephutheni ... akuzona zonke izinhlelo zokusebenza ze-flash ezingasebenzi kahle, ukulawula umthwalo nokudlala kwezinhlelo ze-flash bekuzoxazulula inkinga, kodwa cha, lokho bekunganele , inkinga kwakuyimpahla ye-Adobe, kwakudingeka ukuthi yehliswe ukuze ibanjwe, futhi ikwazi ukulawula konke okuqukethwe, kepha kimi kubonakala sengathi akunjalo ...
Ngikholwa ukuthi kuzodingeka ukuthi sithuthuke kokuqukethwe, ngekhwalithi, ngokukhululeka ... uma okuthile kuvumelana nomhlaba, kungukuthuthuka okulula nokusheshayo, akulungele ukwenza kabusha lokho osekuvele kusebenza, futhi i-flash isebenza, kepha ngoba yinkampani ENYE kuphela eye yakuduba, Sesivele sihluziwe, angisho ukuthi i-flash iphelele nhlobo, kepha uma kuqhathaniswa ... inguquko, kuyilapho i-html5 isanqunyelwe kuma-purists, adlala yonke into, kepha angavumeli lutho, angixolele uma ngicabanga ukuthi ubuchwepheshe buholela ekusebenzeni, Kepha angicabangi ukuthi kuyasangana lokho.
Sisebunzimeni Madoda, futhi into yokugcina ebikade ilula ukumaka ingxenye enkulu yenethiwekhi njengengasasebenzi futhi iphelelwe yisikhathi, ngisho nangaphansi uma kungekho lutho oluthola ukuqeda i-flash ngezingcosana ezimbalwa, ngisho nangaphansi lapho i-flash kuyinto elula ukuyithuthukisa, ngolimi ongakwenza yenza yonke ingxenye yamakhasimende, futhi ngaphandle kokubhala izinsiza eziningi zingenziwa, ngenkathi kulokho okubhekwa njengokukhululekile (hehe), lapho kwenziwa lula ngokwengeziwe, ukuhambisana okuningi kulahleka.
Ngiyaqonda ukuthi abathuthukisi abaningi abahlekiswa yi-flash, kulula kakhulu ukuthi noma ikuphi ukungakwazi ukwenza izinto kungenza izinyathelo zabo zokuqala, kepha masithembeke, ngoba okuyisisekelo kwasungulwa, umhlaba ugcwaliswa ngabahleli bohlelo lwe-inept, kepha nezinhlelo ezingenakubalwa ezivela kubo bonke amakhona omhlaba, ukukhululeka akuyona inkinga, kuyinto enhle. Angisho ukuthi i-flash kufanele ibhekwe njengekusasa, kepha akufanele siyithathe umhlalaphansi inqobo nje uma ingenayo imbangi, kufanele siyilinde ukuthi inqotshwe, bese ukushiywa kolimi bekuzohlangana, kepha hhayi i-veto yokuqukethwe.
Ngiyaxolisa emoyeni wami omubi, kepha ngangijabule ukucabanga ukuthi uhlelo lwaluqala kanjani ukuba lula futhi lube namandla ngokwengeziwe ngokuhamba kwesikhathi, ake sibuyele ekubukekeni kweSoviet kanye namahora amade okusebenza, phila isikhathi eside lo msebenzi! kunomsebenzi wawo wonke umuntu! futhi uma kungenanzuzo ... babambe! UKUTHETHELELA KODWA KONKE KUTHIWA ... asihambisane.
Angiyena umqambi, futhi angiyena umphathi wekhompyutha, ngingumsebenzisi wasekhaya ozizwa ekhululekile ngokukhululeka, ukuphela kwento engithemba ukuthi isebenza kahle ngamabhithi angama-64, futhi awuwaboni amavidiyo aluhlaza okwesibhakabhaka noma yini efana naleyo noma UFuck ubheka kusuka kwiforamu kuya kwiforamu yezixazululo zento ebonakala ilula kakhulu.
Ngidlula nje, ngifaka ama-light distros emishinini yakudala (i-DSL, iTrisquelMini, iVector, i-antiX, i-ArchBang, okuyindlela, i-ArchBang isebenza kahle,!) Futhi angikakufundanga konke ukuphawula, kepha maqondana nokuthunyelwe uqobo, ngicabanga ukuthi kuyiphutha lecebo lokuhlasela -isibonelo kuleli cala- ukuthuthukiswa kweGnash (noma enye into). Kusegumbini le-Free Software lapho umuntu ngamunye athuthukisa lokho akuthola ekuwineni kwamahhala, leyo (phakathi kwezinye izinto eziningi) inkululeko. Ukusekela ukuthuthuka ku-HTML5 kuzo zonke izinto esezishiwo kubonakala kumnandi kimi (empeleni, nami ngiyakuxhasa), futhi ngivumelana nezimpikiswano ezisekela leli zinga lakamuva, kepha kimi kubonakala kuyiphutha lomqondo noma 'lefilosofi' ukuhlasela intuthuko ye-soft-libre efana ne-Gnash (nayo, futhi uqaphele lokhu, bengiyisebenzisa ku-UbuntuStudio kunoma iyiphi i-notebook ye-HP ukubuka amavidiyo ku-YouTube, futhi isebenza kangcono, iyashesha futhi izinze kune-Flash yakamuva efanayo - Ukungasasho isidlali se-HTML5, esiseluhlaza impela-ke qaphela, ngoba yize sisebenzisa kakhulu, sithatha izintende zezandla futhi senza okulindelwe kuso kangcono kunabancintisana naso). Okushiwo. Masisekele esikuthandayo, kepha masingahlaseli noma yikuphi ukuthuthuka kwamahhala, yilokho izinkampani nezinkampani ezizimele ezenzelwe, awucabangi? 🙂
Ukubingelela (ibhulogi enhle, i-FromLinux 🙂
Njengamanje ngisebenzisa i-flash 11, kepha ngifuna ukucacisa izizathu zokuthi kungani ngingayisebenzisi futhi ngisekele ezinye izindlela zamahhala.
Akumahhala: Ungakutholi lokhu kungalungile, angiyona noma ngimelene nesoftware ephathelene. Engifuna ukukusho ukuthi kulokhu, kubaluleke kakhulu ukuthi leli thuluzi, njenge-flash, likhululekile, ngoba lisiza ukulithuthukisa futhi lenze amazinga amasha.
2. Kungukubusa wedwa: Uma manje kunezinye izindlela zamahhala, kepha maqondana nentuthuko yewebhu, i-Adobe Flash iyaqhubeka nokuziphoqa ngezindleko zayo eziphezulu, ikhawulela abathuthukisi, abaningi abasacabanga ukuthi ayikho enye indlela.
3. Kuyamangaza: Isebenzisa amakhukhi adumile e-LSO, agcina idatha yendawo kanye nokuthandwa okubalulekile.
4. Inzima kakhulu: ezinguqulweni zayo zakamuva izidingo zingenangqondo, okuholela ekuphelelwe isikhathi okuhleliwe, okuphoqa abanye ukuthi bathenge i-pc entsha becabanga ukuthi akusasizi ukugcina.
Kungakho ngincoma ezinye izindlela zamahhala ezinjengeGnash, iLightspark, noma i-swfdec.
I-html5 ayixhasi kangako ngoba basebenzisa ubuchwepheshe bokulandela umkhondo kuyo, kepha ihlala ingcono kune-flash.
Kukhona neskripthi se-firefox esiphethwe yi-Greasemonkey extension, esisodwa esibizwa ngeMagic Flashlight nenye esingeyona i-Flash YouTube.
i-html5 ibukeka njengenketho enhle kimi, kepha namhlanje isese nendlela ende yokuhamba ukuyenza ijwayelekile, abantu basasebenzisa i-flash kuwebhu
Isilingo esithandekayo esenziwe ngumNtaliyane
Itimu ye-Adwaita yeFirefox